Iqhubu kusende - Konke odinga ukukwazi ngempilo yakho | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 08/11/2021 21:52 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Kufanelekile, Ezempilo
Ukubonakala kwe- iqhubu kusende Ngokuvamile kuba yisimo esingaholela ohlotsheni oluthile lwenkinga enkulu okufanele ihlaziywe. Amanye amadoda ayawaqaphela awo ukubukeka ngokunganaki noma ngoba umlingani wakho ekutholile.
Isigaxa kusende asisho umdlavuza, nakuba kufanele wenziwe isifundo esijulile ngokuvakashelwa uchwepheshe, njengoba ukubonakala kwayo akusho ukuba nobuhlungu, noma ukopha, nanoma yini efanayo. Ukwanda kwevolumu kule ndawo kungase kube ukubukeka kwenqwaba ngaphandle kokungaphezulu, kodwa kufanele kuhlaziywe ngokuningiliziwe.
1 Kufanele ahlolwe kanjani amasende?
2 Wazi kanjani ukuthi isigaxa singase sibe umdlavuza?
Kufanele ahlolwe kanjani amasende?
Uma ufuna nje yenza iskena, akukephuzi kakhulu ukulindela ukutholwa okungenzeka. Lokhu kuthinta kuzosikhumbuza ukuhlola okwenziwa abesifazane emabeleni abo, lapho kuyodingeka ukuthintana ngezandla ukuze kutholakale ukuthi kukhona uhlobo oluthile loshintsho oluncane, amaqhuqhuva noma osayizi abangafanele.
Kwezinye izikhathi lolu hlobo lokubuyekeza lufinyelelwa ngenxa yokuthi uhlobo oluthile lwe Ubuhlungu ngaphansi kwesisu, emabeleni, esendeni, noma escrotum. Uphawu lwe-alamu luzoba lapho lubhekwa iqhubu elincane emasendeni futhi leyo mpahla yangaphansi iqina kakhulu futhi incane.
Amadoda amaningi, noma engaboni lutho, afuna ukuba njalo ukuhlola okujwayelekile ukubona ukuthi konke kuhamba kahle. Isende ngalinye kuyodingeka lipafwe ngokwehlukana, ngesinye isandla isende libanjwe futhi ngesinye isandla kuyodingeka ukuthi yenza ukuskena. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi kudingekile ukunikeza uphawu lwe-alamu lapho kukhona ukwanda kwevolumu ku-testicle, noma umuzwa wobunzima ongaba buhlungu, ngale ndlela kuzodingeka uhanjelwe nguchwepheshe.
Isikhathi esingcono kakhulu sokuhlolwa ukuthi nini ungaphansi kweshawa noma ukugeza, ngale ndlela, isikhumba se-scrotal sizokhululeka kakhulu. Njengoba sesike sabuyekeza, kuyodingeka ukuthi elinye lamasende liye kolunye uhlangothi futhi lihlole kolunye ukuthi kukhona yini uhlobo oluthile lobukhona njengokuthi isigaxa noma ukuvuvukala. Kufanele uhlole noma ngabe unosayizi ofanayo phakathi kwesende nelinye, futhi uma nawo anobude obufanayo noma obumisiwe.
Isithupha kufanele sijikelezwe bese isende linyakaze kancane ukubona noma yikuphi ukungapheleli noma uma kwenzeka kuvela i-nodule. Kufanele thinta i-epididymis, enye yezindawo lapho kukhiqizwa khona isidoda. Itholakala phezulu nangemuva kwesende ngalinye futhi imise okombhobho. Kuyadingeka ukubheka ukuthi alukho uhlobo lwe-anomaly olutholakalayo.
Enye indawo etholakalayo kungaba i-palpate "i-conductor ehlukile", olunye uhlobo lweshubhu elincanyana nelinwetshiwe eliphuma ku-epididymis futhi elizoba nokuthungwa okubushelelezi. Qaphela ukuthi alukho uhlobo lwesigaxa noma amaqhuqhuva. Lapho enye yezinhlangothi isihloliwe, kuzodingeka ukuthi iphinde kwenye indawo.
Wazi kanjani ukuthi isigaxa singase sibe umdlavuza?
Ezimweni eziningi, isigaxa ku-testicle akuwona umdlavuza. Ingavela ngokushaya okukhulu, lapho uketshezi lunqwabelene khona nxazonke, noma lusuka nje ku-cyst. Udokotela onguchwepheshe uzohlola futhi ahlole kahle.
Ngaphakathi kokuba uhlushwa umdlavuza kunganqunywa uma izici zobungozi zikhona noma unohlobo oluthile lomlando womndeni, ngale ndlela ukulandelela kuzobaluleka kakhulu. Uma uba umdlavuza, kungaziwa ukuthi futhi unalezi zinhlobo zezimpawu:
Ukubonakala kwesigaxa esingajwayelekile, ngokubukeka noma ukuthungwa okungenzeki.
Dolores noma eziningi ezicasulayo ku emuva, ikakhulukazi ngaphansi kwesisu kanye nobuhlungu obunye ku-scrotum.
Ubumnene noma ubuhlungu emabeleni. Kwesinye isikhathi kuvela izigaxa.
Udokotela kufanele enze a ukuhlolwa kwazo zonke lezi zimpawu futhi uqale ukungeza izivivinyo ezengeziwe ukuze uthole ukuxilongwa okunqumayo. I-Ultrasound Kungaba okunye kokuhlolwa, lapho ungahlola khona ukuthi awukho yini umdlavuza wamasende. Izivivinyo nazo zizokwenziwa njenge i-tomography yekhompyutha (CT) noma i-magnetic resonance imaging (MRI) ukuze uthole ukuthi ingabe isandile futhi ingabe isandile. Ukuhlolwa kwegazi kuzophinde kunqume ulwazi olwengeziwe.
Ekubonisaneni okuningi kwezokwelapha, izingane eziningi noma abantu abasha sebevele beza nale nkinga. Eziningi zalezi zigameko zivela neqhubu elikhulu ngendlela yokuthi kuvele ukuthi linelinye isende kodwa akufanele lithathwe njengento ethusayo.
Ngaphambi kwanoma yikuphi ukungabaza noma uphawu olungafanele kumele uye kudokotela ukuze uthole usizo olukhulu futhi kusenesikhathi. Kufanele unikeze okuningi kakhulu ukubaluleka kubafana abancane lapho bethola lezi zigaxa, njengoba ezimweni eziningi akulona uphawu oluhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Iqhubu kusende
Ungazi kanjani ukuthi indoda isikhathele nguwe
Ungawagwema kanjani amadoda e-cellulite